I-Gelatin mask ebusweni: iimpawu zokupheka, zokupheka. Ukusetyenziswa kwee-gelatin masks ebusweni besikhumba.
Ukupheka kwee-gelatin masks ngobuso kunye neempawu zesicelo sabo.
Ukwandisa, abafazi bajika kwiimpawu zezilwanyana ezilungiselelwe ngokuzimela ekhaya. Oku akumangalisi, kuba nje unako ukuqiniseka ukuba yenziwe izithako ezisebenzayo kunye nezendalo. Kukho inani elikhulu leempendulo zokunakekelwa kwesikhumba ebusweni. Phakathi kwabo, i-gelatin masks, equlethe i-collagen eninzi, isebenza ngokugqithiseleyo, kwaye uyakwazi ukubuyisela ubuhle bayo kunye nokunyaniseka.
I-Gelatin inakho kakhulu. Ngaloo, unokubuyisela iinwele zakho okanye uqinise izipikili zakho. Kodwa ngokukhethekileyo luncedo kwesikhumba. Ngaphantsi kwefuthe lalo, liba li-elastic, kwaye imibimbi iyanyamalala njengokungathi imilingo. Ukusebenza kakuhle, kufuneka kwenziwe rhoqo, kodwa emva kwesicelo sokuqala uza kubona umphumo.
Indlela yokwenza imaski ye-gelatin?
Ngaphambi kokuqhubela ngqo kwiirephepheni, kuyafaneleka ukuqonda izinto ezisisiseko zokulungiselela i-gelatin. Ukuba wakha wasebenzisa ekhitshini, akuyi kubakho ubunzima. Kwanele ukuthenga ukutya kwe-gelatin ngaphandle kwamadayiti kunye nezongezelelo kwaye uyanciphisa ngamanzi abandayo. Ukufumana imaski, i-tablespoon enye yanele. Kufuneka kugcwaliswe isiqingatha seglasi yamanzi kwaye ulinde ixesha elithile lide likhule. Emva koko, ukutshisa lo mxube kwiplani ukwenzela ukuba i-gelatin ipheliswe ngokupheleleyo. Lindela ide iphose umncinane kwaye uqale ukongeza izithako ezisele.
Ukuze uthembeke, qhagamshelana nemiyalelo yokupheka, ehlala ekhupheni. Inyani kukuba ngamanye amaxesha i-gelatin iyahlukahluka kubakhi abahlukeneyo, ngoko inkqubo yokulungiselela ingahluka. Ukongezelela, yakha kwimaski yomyalelo. Ngamanye amaxesha amanzi kufuneka athatyathwe omnye umbane: iJusi, ubisi okanye i-decoction yeerbshi.
Jonga ubuso obusekelwe kwi-gelatin: zokupheka
Kukho inani elikhulu lokupheka eliza kukunceda ukuhlangabezana neengxaki ezahlukeneyo zesikhumba nge-gelatin. Xa ukhetha, qalisa kwiimfuno zakho.
Isiqhamo sezithelo zegelatin
Ukuze ulungiselele le maski, kufuneka ucoce i-gelatin eyomileyo kwijusi yesithelo. Ingaba i-orange okanye iidipefruit, unokusebenzisa umxube weejusi. Lindela ide ivule, ize ishushu i-little. Lindela isikhashana de kube i-gelatin sele ihlile kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo kwaye isebenze ukujongana. Unokwenza ngoboya bekoton okanye ibrashi.
Gcina imaski ebusweni bakho imizuzu engamashumi amabini uze uzame ukuthetha nokuhambisa iintsundu zakho zobuso lonke eli xesha. Emva kolu xesha, uhlambe ngobumnene ngamanzi afudumeleyo.
I-Gelatine mask malunga namachashaza amnyama
Lungiselela imaski ngendlela efanayo nangaphambili, kodwa endaweni yesiphumo sesithelo, sebenzisa amanzi alula. Faka isicelo ebusweni bakhe kwiziqendu eziliqela. Lindela imizuzu engama-20 uze uqale ukudubula. Le nkqubo kufuneka iphathwe ngokulumkisa. Khonkwane kancinci umgca we-mask kunye ne-fingernail yakho uze uyikhuphe kancane. Yenza oku kubuso bakho.
Ukuba emva koko, cinga ifilimu ethatyathwe, uya kubona amaninzi amachashaza amnyama ashiye isikhumba sakho sodwa. Qinisekisa ukusebenzisa i-lotion kunye nekhefu kuyo.
Mask of gelatin kwi-acne
Ngaphambi kokuba ulungiselele i-gelatin, kufuneka wenze i-decoction yamacandelo. Oku kulungele i-calendula, inzala okanye iSort John's wort. Zinepropati echanekileyo yokulwa nokuvuvukala kwaye ziyakwazi ukucoca ubuso bakho besikhumba kwi-acne.
Dlulela i-decoction ecolile ye-gelatin, linda kude iqhube kwaye ifudumele ide ichithwe ngokupheleleyo. Kwakhona, pholisa encinane uze usebenzise ebusweni. Le maski akufanele ikhutshwe, kungcono ukuhlamba ngobumnene ngamanzi afudumeleyo.
Ukuba ufuna ukubuyisela imeko yesikhumba sakho, yenza i-gelatin maski kabini ngeveki. Jonga kakhulu, ngakumbi xa uyidubula. Musa ukukwenza ngenyameko, kuba unokulimaza ulusu.
Indlela yokukhetha isiseko?
Iimaski ezinxamnye nokuguga kwesikhumba
Imizobo yobuso bokuhlanjululwa kwemvelo
Indlela yokulahla amanqaku amnyama ngobuso ngokukhawuleza nangempumelelo?
Unokunyamekela njani isikhumba seoli?
Isaladi yaseTurkey kunye ne-avocado
I-intrauterine yokuvutha: i-pros and cons
Ukukhulelwa kunye negazi
Slender silhouette. Yoga - ezinzima
6 izikhalazo ezingalindelekanga ezibhekiswe kwiinkwenkwezi zaseRussia
Yintoni ukupheka ngokukhawuleza kunye nokumnandi?
Ukudibanisa i-twine yabaqalayo kunye nabantwana: ukhetho lwezandla zasekhaya
Iipropati ezisebenzayo zefelksi
I-Snowman evela kwikotishi yasekottage
Indlela yokugcina ulwalamano olulungileyo kunye nomthandwa wakho ebomini
I-pizza emfutshane kwi-pastry
Iintsholongwane ezinobungozi ngexesha lokukhulelwa komfazi
Iziphakamiso ezimbalwa zokukhetha nokunyamekela iingubo zezimvu